Nea Ɛto So Abien A Ɔde Kɔmaa Korintofo 3:1-18
Adansedi nkrataa (1-3)
Apam foforo no ho asomfo (4-6)
Apam foforo no anuonyam kyɛn so (7-18)
3 Yɛnsan mfi ase nni yɛn ho adanse bio anaa? Anaa sɛnea ebinom yɛ no, ehia sɛ yɛde adansedi nkrataa brɛ mo anaa yenya bi fi mo hɔ? 2 Mo ara mone yɛn krataa+ a wɔakyerɛw wɔ yɛn koma so, a nnipa nyinaa hu na wɔkenkan. 3 Biribiara kyerɛ sɛ moyɛ Kristo krataa, na yɛn a yɛyɛ asomfo no, yɛn na yɛkyerɛwee.+ Ɛnyɛ adubiri na yɛde kyerɛwee, mmom yɛde Onyankopɔn teasefo no honhom na ɛkyerɛwee. Yɛankyerɛw no abopon so;+ mmom yɛkyerɛw no honam apon so, wɔ koma so.+ 4 Yɛnam Kristo so na anya saa ahotoso yi wɔ Onyankopɔn mu. 5 Ɛnyɛ nea yɛreka ne sɛ yɛn ara yɛfata yiye sɛ yɛyɛ saa adwuma yi, na mmom Onyankopɔn na ɔma yɛfata yiye.+ 6 Ɔno na wama yɛafata yiye sɛ yɛyɛ apam foforo+ asomfo. Yɛnyɛ mmara a wɔakyerɛw+ ho asomfo, na mmom yɛyɛ honhom de; efisɛ mmara a wɔakyerɛw no bu nnipa fɔ kɔ owu mu,+ na honhom no de, ɛma nkwa.+ 7 Mmara a ɛde owu ba a wɔakyerɛw* wɔ abo so+ no mpo bae wɔ anuonyam mu, enti Israel mma antumi anhwɛ Mose anim esiane anuonyam a na ɛwɔ n’anim no nti.+ Saa anuonyam no, na ebetwam. 8 Ɛnde, honhom a wɔde ma no+ nso ɛ? N’anuonyam rennɔɔso nsen saa+ anaa? 9 Sɛ na mmara apam a ɛde afobu ba+ no wɔ anuonyam+ a, ɛnde na nea ɛde trenee ba no benya anuonyam a ɛkyɛn saa koraa!+ 10 Nokwasɛm ne sɛ, nea bere bi na ɛwɔ anuonyam no mpo, wɔayi ɛho anuonyam no afi hɔ esiane anuonyam a ɛboro ɛno so nti.+ 11 Sɛ nea na ebetwam no de anuonyam na ɛbae+ a, ɛnde nea ɛbɛtena hɔ no anuonyam bɛkyɛn saa koraa!+ 12 Esiane sɛ yɛwɔ anidaso a ɛte saa+ nti, yɛde ahotoso kɛse kasa; 13 na nea Mose yɛe no, ɛnyɛ ɛno bi na yɛyɛ. Ɔno de, na ɔde ade kata n’anim+ sɛnea ɛbɛyɛ a Israel mma rennyen wɔn ani nhwɛ nea na ebetwam no awiei. 14 Nanso, wɔn adwene dae.*+ Na ɛde besi nnɛ no, bere biara a wɔbɛkenkan apam dedaw no, nkataanim no da so ara wɔ hɔ a wonnya nyii,+ efisɛ ɛnam Kristo nko ara so na wobeyi afi hɔ.+ 15 Nokwasɛm ne sɛ, ɛde besi nnɛ nyinaa, bere biara a wɔbɛkenkan Mose nsɛm no,+ nkataanim da so ara kata wɔn koma so.+ 16 Na sɛ obi dan ba Yehowa* nkyɛn a, woyi nkataanim no.+ 17 Yehowa* yɛ Honhom,+ na baabi a Yehowa* honhom wɔ no, ahofadi wɔ hɔ.+ 18 Na bere a yɛn nyinaa de yɛn anim a yɛnkatae no da Yehowa* anuonyam adi sɛ ahwehwɛ no, wɔsakra yɛn kɔ suban koro no ara mu fi anuonyam mu kɔ anuonyam a ɛkyɛn so mu, sɛnea Yehowa* a ɔyɛ Honhom* no yɛ no no pɛpɛɛpɛ.+
^ Anaa “wɔakurukyerɛw.”
^ Anaa “adwene ano kumii.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “sɛnea Yehowa honhom.”